एमालेले सांसदहरुलाई आफ्नो विचार राख्न संसद अवरोध गरेर गल्ती गर्‍याे : मन्त्री झाँक्री – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
एमालेले सांसदहरुलाई आफ्नो विचार राख्न संसद अवरोध गरेर गल्ती गर्‍याे : मन्त्री झाँक्री
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार २०:०२
काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरुलाई आफ्नो विचार राख्न अवरोध गरेर गल्ती गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
मन्त्री झाँक्रीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संसदमा प्रश्न गर्दा संसद अवरुद्ध पारेर सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे आफ्नो विचार राख्न एमालेले नदिएको आरोप लगाउनु भएको हो ।
शुक्रबार एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे दिएको कतिपय अभिव्यक्ति निराधार र झुटो रहेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आपत्ति जनाएपछि त्यसको विरोधमा एमालेले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध पारेको थियो ।
सोही प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ओलीलाई प्रश्ननै गर्न नमिल्ने हो र भनि प्रश्न समेत गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘के डमोक्रेसीमा उहाँले भनेको कुरा यो गलत हो भन्न नपाउने त होइन होला । फेरि संसदका आफ्ना मर्यादाहरु पनि छन् । मर्यादा भित्र त सबै बस्नुपर्छ । तर उहाँलाई प्रश्न गर्न नहुने प्रश्नरहीत व्यक्ति हो र ? प्रश्नरहीत व्यक्ति होइन । त्यसो भएको हुनाले त्यसको जवाफ अरु ढंगले पनि दिन सकिन्थ्यो । नेताहरुले लामोलामो वक्तव्य दिँदा सांसदहरुले आफ्नो विचार राख्ने काम बाँकि नै छ । त्यसैले यसरी अवरोध गर्नु राम्रो होईन ।’
मन्त्री झाँक्रीले संसदमा मर्यादा भित्र सबै रहनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
छुट्टाछुट्टै स्थानमा अवैध लागूऔषधसहित सात जना
विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी लगाउने काम
बाढीले विद्युतका पोल ढालेपछि